बेकार दुई घण्टा : ताँई न तुँई, हाता लायो फुई !! - News from Nepal
हामीकहाँ मान्छे मान्छेको राजनीति मिल्दैन भन्ने कत्रो चिन्ता छ । विचार, शिद्धान्त र आस्था जस्का जहाँ भएपनि मानवीय राजनीतिमा एकता कसरी हुन्छ भन्ने बागलुङबाट अरुले सिक्नु पर्दछ । कुरा धेरैलाई पत्याउन अफ्ठेरो लाग्ला । हैन होला जस्तो सत्यले पनि सोंच्ला । हामी बीचका अनेकन असमझदारी र असमानताले मन खाल्डो पारेको वर्तमान राजनैतिक वृत्तमा यो एकदम नयाँ र अविस्मरणीय हुनपनि नसक्ने कठीन घटनाकारुपमा परिस्थितिको चर्चा गरिएको छ । कारण कोरना प्रभाव ःत्यसमा पनि बागलुङको राजनैतिक मनहरुले दुईघण्टामा दिएको सन्देश मुलुकमा त्रास फैल्याएको प्रकोपसँग जोडिएको मानवीय समवेदनामा अत्यन्त रचनात्मक परिचर्चा हुनेछ ।
दलहरुको आशय, राज्य सत्तामा पुग्ने र जनताको सेवामा समर्पित हुने नै हो । जनवेवाको खरो कशम खाएका दलका नेताहरु, त्यो पनि बागलुङे लास्टै जनसेवी हुन् । भएन, कोरना प्रभावले लखेटेको मानवीय सन्त्रासमा, गतिलो एकता अभ्यासले, गतिलो उदाहरण पेश गरेको छ । निर्वाचनमा कतै बाम गठबन्धन भन्दै हिंडे, कतै प्रजातान्त्रिक गठजोड पनि नखेखिएका होईनन् । तर विपत्तिको यत्ति विघ्न सन्त्रासको क्षणमा सबै दलहरुको एकत्व झनै राम्रो सवाल बन्यो ।
सत्तासिन दल नेकपाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सभापति, बाम घटक राष्ट्रिय जनमोर्चा, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, राप्रपा, समाजवादी पार्टि, माले, जनतादल, त्यत्ति मात्र होईन, वर्तमान राजनैतिक धु्रवमा राज्यले अतित्रान्तिकारी भन्दै बन्देज लगाएको दल नेकपा (विप्लव) समुहका नेताहरु एकै कोठामा अटाएर जनताको सन्त्रासमा गतिलो साथ दिने निर्णय र अग्रसरताले, जिल्लावासीलाई त अचम्मित तुल्याएको पक्कै हो । त्यसमा पनि छिमेकी जिल्लादेखि सिंगो मुलुकलाई समेत यो गतिलो सवक यो । यो महामारीको त्रासबाट जनताको भावनात्मक मुक्तिका लागि हाम्रो एकता दरिलो उदाहरण भएको नेकपाका अध्यक्ष ईन्द्रलाल सापकोटाले भने । काँग्रेस अब काँग्रेसमा मात्र सिमित भएन, विपक्षी कित्तामा मात्र अट्न सकेन, यो कुरा काँग्रेस सभापति दिपेन्द्र थापाले बोले । संघीताका कुरा बाँच्यौं भने गर्दै गरौंला, यो महा विपत्तिमा सबै एक ठाम हुनुपर्ने भयो, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष अमर थापाले कड्केरै बोले । पाँच ‘स’ का कुरा चुनावमा गरौंला, समाजवादीले बोल्यो, हलो कि गाई खास विषय होईन, यो सन्त्रासमा जनतालाई ढुक्क पार्ने बेला हो, राप्रपा बोल्यो । यो सत्ता भत्काउने हो, नयाँ सत्ता जनता बाँचे उनीहरुले नै ल्याउँछन् । अब जनताको साथ सबैलाई चाहिने भएकाले हाम्रा मतभेदहरु अहिले थाति राख्यौं, नेकपा विप्लवका एक नेता पनि गर्जिए । मञ्चमा कसैका झण्डा थिएनन् । न आ आफ्ना राजनैतिक एजेण्डा नै । न फरक फरक पार्टिका नेता जस्ता, हुन् त बागलुङे नेता उनीहरुको चेहरामा मात्र जनतालाई यो सन्त्रासबाट मुक्त कसरी गर्ने भन्ने एकै बोलको बोली थियो । साझा जिम्मेवारी लिन उनीहरुमा देखिएको आतुरताले यस्तो लाग्थ्यो, वाहा ! हाम्रा जिल्लाका जस्ता नेता सबै जिल्लामा, त्यो मात्र हो र ? देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा भइदिएको भए, यही हो गढातन्त्र भनेर छाति फुलाएर भनिन्थ्यो । देशमा विपत्ति आउँदा हाम्रा जिल्लाका जस्ता नेताका उदारवादी सौंच र चिन्तनको विकास देशका नेतामा पनि भइदिए, जनता खुसी र सुखी आजै भए भनेर यो हातले भुईमा ठोकेर हिडिन्थ्यो । खै त्यस्तो दिन आउलाकी भन्दै बसौं ।
हाम्रा नेताहरु यो सन्देशलाई जिल्लामा मात्र सिमित राख्न चाहँदैनन् । नत यो देश भित्र मात्र राख्न चाहन्छन् । मुलुकको १ सय २१ राष्ट्रमा कोरना प्रभाव फैलिरहँदा, अनेकतामा एकता खोज्ने बागलुङे राजनैतिक नेताहरुले १२ घण्टे वृहत छलफलबाट दीर्घकालिन योजना बाहिर ल्याएका छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मिडियाहरु यतिबेला बागलुङका कुना काप्चामा छिरल्लिएका छन् । जनताले कस्तो अनुभूति गरेहोलान उनीहरुको चासो त्यतातिर छ । यत्रो अद्भूत निर्णय गर्न सक्ने नेताहरु अव फेरि आ आफ्ना राजनैतिक वृत्तमा फर्केर वर्तमानको गाढा मनलाई कसरी टाढा बनाउलान भन्नेमा मिडियाकर्मीहरु, विश्लेषकहरु चकित परेका छन् । यो नौलो घटना हो, संसारमा अनेकन मनहरु छन् । सबै मन मिल्न नसकेर बेमेल भएको हो । कोरना प्रभावले देश दुनियाँका के ग¥यो खास चासो भएन, तर बागलुङमा गज्जव भयो, एक राजनैतिक विश्लेषकले यस्तो अड्कल जीवन रहँदासम्म पनि वा नरहँदाको अवस्थामा आत्माले पनि योखालको घटनाको परिकल्पना नगरेको बताउँछन् ।
राष्ट्रिय झण्डा बोकेका, सबै कार्यकर्तालाई माक्स र स्यानीटाइजर लिएर गाउँ गाउँमा पुग्ने निर्णय सहित महाअभियान उनीहरु जुटेको कुरा लोकतान्त्रिक चोकबाट पहिलो सन्देश दिने उनीहरुको पूर्ण तयारी देखिन्छ । जिल्लाका सबै स्वास्थ्य संस्था, स्कुलका खेल मैदान, उच्च पहाडि चुचुराहरु, डाँडा पखेरामा दलका कार्यकर्ताका अगुवाइमा क्वारेन्टाईनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार बनाउने सर सामाग्रीहरु तैनाथ पारेका छन् । हिजो निर्वाचनमा भेष्टा, टोपी, झोला, काइयो, काँटा, छाता बाँडे भनेर आलोचित भएका नेताहरु यतिवेला जनताका लागि गास वास कपास र आभास सहितको व्यवस्थापनमा जुरुक्क उठेका छन् । संघीय साँसदहरु, प्रदेश साँसदहरु, गाउँपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्षहरु, वडाका वडा अध्यक्ष देखि सबै सार्वजनिक ओहोदाका प्रतिनिधिहरु अत्यन्त सजगताका साथ जनसेवामा तत्पर देखिन्छ । लाग्छ, यो माहोलले कोरना आफै डराउँछ र सात कोष भाग्छ । बजारका व्यवसायीहरु हिजोसम्म माक्स लुकाएको आरोपमा आलोचित थिए, ५ रुपैयाँको माक्सलाई २ सय लिए भनेर खप्की खान्थे, माक्स छैन भनेर सेतो कागज पसलमा झुण्ड्याएका देखिन्थे, तर हाम्रा नेताहरुको महा अभियानले उनीहरुमा पनि प्रभाव परेको देखियो । जिल्लामा चाहिने माक्स जिल्लाका सबै मेडिकल, अस्पतालमा छेउँकुना छाम्दा प्रसस्त पुग्ने भयो । महंगी बढ्छ कि भन्ने अर्को सन्त्रास थियो, व्यवसायीहरु सेवाका लागि पैसा नै नलिने गरि यो समस्या टार्ने हिम्तसहितको वित्रप्तिपो निकाले । शिक्षण संस्था बन्द गर्ने सरकारी निर्णयपछि जागिरबाट मुक्ति पाएका शिक्षकहरु राजनैतिक दलको चुनावमा मात्र हिंड्छन् । अरुवेला हिंड्दैनन् भन्ने भनाईलाई उल्टाइदिने प्रण गरेका छन् । निजी शिक्षण संस्थाले एक महिना नपटाएर शुल्क लिने सवालमा आलोचना खेप्दै आएकोमा पुरै ३ महिनाको शुल्क मिनाहा गरिदिने प्रतिवद्धता देखाएर, आफूहरु नाफामुखी मात्र होईनौं, समाजको सेवक पनि हौं भन्ने उदाँगै पारेर देखाइदिए । सधै सरकार र राजनैतिक दलहरुको अगतिलो समाचार छाप्ने सञ्चार माध्यम र त्यसमा क्रियाशील पत्रकारहरु अवका दिनबाट नकरात्मक समाचार कहिल्यै नलेख्ने कसम खाए । आफ्ना सञ्चार माध्यमहरुबाट सबै सचेतनात्मक प्रचार प्रसार दिइरहेका देखिन्छन् । वित्तिय संघ संस्थाले दलहरुलाई चाहिएको आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । अस्पताल, मेडिकल सञ्चालकहरु कोरना संक्रमित भेटे निःशुल्क उपचार गराएर उल्टै दुई चार हजार हातमा हालेर घरसम्म पठाइदिने सन्देश दिन थालेका छन् । जनतामा कति मजाको जागरुकता छाएको छ । हिजो निर्वाचनमा एक मुक्का खाएका पात्ले गाउँमा हर्केले, मुक्का हान्ने विर्खेलाई अव आइन्दा नजानेको राजनीति गरेर अव नलड्ने कशम खाएको अखबारमा समाचार आएको छ । बोली बारेका नेताहरु धमाधम, हृदय खोलेर ठूलै दिल सहित जनताको सन्त्रास मेट्न खटिदैछन् भन्ने अन्तरवार्तले जनतामा पनि एकत्वको राष्ट्रिय भावना उर्लिएको छ । जता ततै क्या गज्जवको सन्देश, कति राम्रो साथ, मन भक्कानिएर सधै यस्तै भइदियोस भन्ने चाहनाले अन्तरमन उद्धेलित भएकोबेला कानैको छेउमा मलिन ध्वनी गुञ्जियो ।
ए, फोन पो रहेछ, एकै छिनमा काटियो । सन्देश त साथीलाई दिनु प¥यो भनेको नेपाल टेलिकमले पनि कोरनाबारे सचेतना सन्देश रिङटोनमा राखिदिएको रहेछ । मैले भने, ‘साथी, हाम्रो बागलुङमा देखिएको सकरात्मक सन्देश, देश दुनियाँलाई सुनाउन पर्छ है ।’ यत्ति के बोलेको साथीले भन्यो, ‘के रे ? के भन्छ, कस्तो सन्देश हो ? हैन सपनामा छस् कि विपनामा, यहाँ पनि यस्तो संभव छ ?’ हैन, उसको एकहोरो बोलीपछि, मै यसो यता फर्केर हेरेको बरै ! म त, विस्तरामा पो छु । कामको थकान, यस्सो पल्टेको निद्रादेविले यस्तो कथा मेरो मनस्पटलमा भन्दै रहेछिन् । के व्युझिए, सबै चकनाचुर भयो । अन्तमा कथा त, ताँई न, तुँई, हाता लायो दुई, भएछ । बेकार दुई घण्टा ।